Fantaro i Susan Gehr, ilay mpampiantrano ny kaonty Twitter @NativeLangsTech ho an’ny 6-12 Jona 2019 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jona 2019 13:59 GMT
Sary natolotr'i Susan Gehr
lahatsoratra fampahafantarana ity izao hiresaka momba an'i Susan Gehr (@vurayav) sy izay kasainy horesahana mandritra ity herinandro ity amin'ny maha-mpampiantrano azy.
Karuk avy any amin'ny tanànakelin'i Athithuufvunupma sy Ináam, akaikin'ny tanànan'i Happy Camp, California aho. Nanomboka nianatra ny fiteniko aho tamin'ny taona 1992. Nandrisika ahy hanomboka hampianatra ny mpampianatra ahy, ary izaho no mpampianatra Karuk voalohany tamin'ny Fandaharam-pianaran'ny Tenin-drazana tao amin'ny Sekoly Ambony Hoopa Valley. Nahazo ny mari-pahaizana maîtrise momba ny fiteny aho tao amin'ny Oniversiten'i Oregon satria naniry ny hianatra ny fomba hamakiana ny asa soratra ara-pitenenana nosoratana Karuk. Nahazo ny mari-pahaizana maîtrise faharoa aho tamin'ny siansan'ny famakiam-boky sy ny serasera satria naniry ny hahazo valinteny tamin'ny fanontaniako momba ny fahazoana miditra maharitra amin'ny asa fandalinana momba ny fiteny Karuk.
Angamba eo amin'ny mpiteny Karuk miisa enina eo izahay no mampiasa izany ho fiteny voalohany ary mpianatra am-polony maro no mianatra izany ho fiteny faharoa. Manana rakibolana an-tserasera tena matanjaka izahay miaraka amin'ny feo, noho i Andrew Garrett, Line Mikkelsen, ary ny olon-drehetra ao amin'ny Survey of California sy ny Fiteny Indiana Hafa, ao amin'ny Oniversiten'i California ao Berkeley. Manana vondrona mpiadihevitra tena mavitrika roa izahay ao amin'ny Facebook. Maro aminay mpianatra ny fiteny faharoa no nanatontosa sarimihetsika fohy amin'ny fiteny Karuk, sy lesona momba ny fiteny amin'ny aterineto. Mpiteny sy mpianatra Karuk am-polony no manaraka ny Fandaharam-pianarana maîtrise noho ny ezaka avy amin'ny Mpanandrateny ho Famelomana ny Fianarana ny Fitenin'ny Indizeny ao California.
Mandritra ny herinandro izay hitantanako ny kaonty @NativeLangsTech dia hifantoka amin'ny fomba fampiasan'ireo mpampianatra sy mpianatra ny fiteny Karuk ny teknolojia hanohanana ny fandalinana ny fiteny sy ny fanomezana aina izany nandritra ny taona maro aho. Mifototra amin'ny tahiry, sary-soratra, fiteny, ary CoLang, ny Ivontoerana ho Fiaraha-miasa Fikarohana ny Fiteny ihany koa ny zavatra kasaiko atao.
Ny fahafahana mampihatra ny fianarana ny fiteny sy ny fampiasana izany na aiza na aiza toerana misy ahy no tena antony manosika ahy ho amin'ny fahavitrihana nomerika. Ny nofiko ho an'ny Karuk dia ny mba hananan'ireo taranaka mpianatra sy ny mpiteny Karuk ankehitriny, izay vitsy anefa tena matanjaka, taranaka vaovao avy amin'ny mpianatra sy mpiteny mavitrika mba hirosoan'ilay fiteny.